PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-10-24 - Ba­zohlony­iswa ngez­incwadi zokushayela
Ba­zohlony­iswa ngez­incwadi zokushayela
LUFIKE nen­jab­ulo uh­lelo lokuhlo­mula nga­math­uba okuy­ofun­dela ukushayela, ngaphan­dle kokukhokha.
Loluh­lelo lwen­ziwe wuMasi­pala waseMthon­ja­neni, ul­wen­zela intsha eqhamuka emaWa­dini angu-13, kuh­langene neqhamuka emakhosini am­athathu ekungeyasOgel­weni, kwaSan­guye kanye naseNtem­beni. Ikhu­luma ku­lom­cimbi iMeya ka­Masi­pala, uKhansela Si­bonginkosi Biyela, ibonge ukubam­bisana komkhandlu wayo na­makhosi, uma benez­inhlelo eziletha in­tuthuko em­phakathini abayakhele.
‘Njen­goba sibuye savakashela nezin­dawo zem­boni yezokuthutha, lapho sifike sathatha khona aba­sizi babashayeli kanye nabasebe­n­e­sikhathi be­sebenza emarenke, be­sen­zela ukuthi bonke abantu bahlo­mule njen­goba bey­ingx­enye.
‘Njen­goba si­bonile abanye es­i­bafake ku­loluh­lelo bahlo­mulile, sekukhona labo asebe­sebenza lokho okuyok­wenza ukuthi, ba­size imin­deni yabo ekux­osheni ikati eziko.
‘Siz­imisele ukubona intsha ithuthuka kuy­ona yonke imikhakha, ukuze kusasa ingazitholi iphen­duka ondin­g­a­sithebeni aban­ge­nam­sebenzi wa­lutho, nabayo­gcina se­bey­izigebengu ez­ih­lukumeza umphakathi.
‘Okunye okubalulek­ile ukuthi loluh­lelo sil­wenza ngokubam­bisana no­somab­hizin­isi abakhele umkhandlu.
Lokho okuwukuthi sig­wema ukuthatha lokhu okun­cane esinakho, sikuyise ezin­daweni ezin­gafanele,’ kuc­haza uBiyela.
Omunye wabahlo­mule nga­loluh­lelo uNksz. Nonhlanhla Biyela, un­come kakhulu umasi­pala, ethi loluh­lelo lu­zobenza bangqongqoze kalula eminyango yokuqashwa. uMthon­ja­neni Mu­nic­i­pal­ity of­fers driv­ing lessons